नेपाल अाइडलको पीडा: कार माग्दा उल्टै ८ लाख माग्छ, मैले कहाँबाट ल्याउने ? – Khabartime
नेपाल अाइडलको पीडा: कार माग्दा उल्टै ८ लाख माग्छ, मैले कहाँबाट ल्याउने ?
२६ फाल्गुन २०७४, शनिबार ०२:५६ 122 पटक हेरिएको
एपी वान टेलिभिजनबाट प्रशारित नेपाल आइडलको पहिलो संस्करणका विजेता बुद्ध लामाको एउटा अडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्चामा आएको छ । अडियोमा बुद्धले नेपाल आइडल भएवापत पुरस्कारमा जितेको कार अहिलेसम्म चलाउन नपाएको गुनासो गरेका थिए.सार्जनिक भएको एउटा अडियोमा उनले भनेका थिए, ‘मैले पुस्कारमा पाएको जितेको कार पाएँ, तर ब्लु-बुक पाएको छैन । ब्लुबुक नपाएपछि गाडी कसरी चलाउने ?’ लामाका अनुसार उनलाई ८ लाख रुपैयाँ ट्याक्स मागिएको छ, जुन तिर्न सक्ने स्थितिमा उनी छैनन् ।
तर नेपाल आइडलको आयोजकले अझै उनलाई पुरस्कार दिएको छैन, अझ बुद्ध लामालाई खातामा पैसा नभएको चेक दिएर झुक्याइरहेको छ भन्ने सुन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्छ । बुद्ध आफैले आफु आठ महिना देखी पुरस्कारको लागी धाइरहेको तर आयोजकले आफैसंग १० लाख मागेको खुलासा गरेका छन । बुद्ध लामाले पुरस्कार नपाएको बिषय उनकै मुख बाट सुन्नुहोस…